UCanzibe 30, 2018 admin
Ingxelo Daily Market Kraken for 30.05.2018
$180M bakurholela kuzo zonke iimarike namhlanje
Ndwendwela icandelo Malunga kwi blog yethu ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga Kraken Report Daily Market Apha
ukunyanzeliswa komthetho German wafumana $ 14M ngokuthengisa cryptocurrency kubanjwa
Abasemagunyeni German ziye nje wenza ngeenxa $10 million evela kwintengiso Bitcoin ukuba ethathwe kuphando lolwaphulo-mthetho. kwakhona, Benza amanye $4 million ngokuthengisa ezinye cryptocurrencies.
Le cryptocurrencies kuthengisiweyo ngazo ziquka 1,312 Bitcoins leyo ikakhulu ethinjiweyo wokulwa kwiqonga elibizwa LuL.to, elo ngokungekho ngokuthengisa eBooks copyright kunye neencwadi ezishicilelwe emacwecweni ngamaxabiso aphantsi kakhulu. Le ndawo yayibanjwe bavala Juni wokugqibela, abaqhubi bayo babanjwa kunye nempahla yawo kwingxowa-mali leyo uqobo esetyenziselwa boncedo yamapolisa.
Ukuthengiswa zenzeka ezimbalwa kweenyanga, kuthotho ngaphezu 1,600 imicimbi kwiqonga cryptocurrency yorhwebo German.
AIgatha umhla crowdsale kuye isaziso
AIgatha crowdsale siqala 5. Jun 2018. AI Service Platform Ngokusekelwe Imvumelwano System
AIgatha sele ukuphuhlisa intelekelelo kwasasazwa nobukrelekrele artificial ukuba ngaphezu kweminyaka, uninzi lwazo zisetyenziswe kuphando zemfundo. Ngoku ukuhlanganisa oko blockchain ukwenza enye iteknoloji entsha lonke. Siye baye benza umgudu ukuze yazi ngobuchwepheshe, ekuxhobiseni abantu isakhono creativities lokufeza, ukwandisa umgangatho yabantu abaphila, kunye nokukhulisa uphuhliso impucuko jikelele.
331 abatyali-Japanese crypto wathi $ 1m okanye ngaphezulu kweengeniso 2017
I-National Arhente Tax of Japan ingxelo ukuba 331 ngaphandle 549 abatyali crypto ngabanye ebhalisiweyo zuza ngaphezu 1 yezigidi zeerandi ngo nokurhweba nemali virtual yenzuzo.
Iqela tax ophetheyo uphando wathi e 2017 Imisebenzi yorhwebo crypto edityaniswe Bitcoin imali ngeniso zokuthuthukisa GDP Japan xa 0.3%
10 trends kuphuhliso lwamashisini crypto ngo 2018
Iingcali ezivela The o ...
Post Previous:Yintoni cryptocurrency ukuba abatyali bayacetyiswa ukuba athengise, yaye nguwuphi ukuze ugcine?